3 Siyaabaha dejinta Xiriirada in Samsung Galaxy
1 Maamul Xiriirada Android
Maamul Google Xiriir
Tirtiray Xiriirada Recovery
Undelete Android Xiriir
Android Maareeyayaasha Contact
Kabsado Xiriirada Android
Xiriirada Android kaabta
Import / Dhoofinta Android Xiriir
Xiriirada kala soocaan Android
Abaabulaan Xiriirada Android
De-nuqul Xiriirada Android
Kabsado Samsung Xiriir
Samsung Xiriirada Tools kaabta
Midowdo Xiriirada nuqul
Nidaameed HTC Xiriir
2 Transfer Xiriirada Android
Android inay macruufka
Lumia in Android
Nokia in Android
Android inay Nokia
iCloud Xiriirada in ay Android
CSV Xiriirada in ay Android
Android inay HTC
Android inay Samsung
Android inay Android
Gmail Xiriirada in ay Android
Xiriirada Android inay Gmail
Android inay SIM Card
Android inay PC
Symbian in Android / macruufka
Xiriirada in Samsung Galaxy
Lumia in Samsung
Nokia in Samsung Galaxy
Samsung in Samsung
Blackberry in Samsung
macruufka in Samsung
iPhone in Samsung
Samsung si iPhone
iPhone in Google Nexus
iPhone in Nexus 4
HTC in LG G3
LG si iPhone
Sony Xperia si iPhone
iPhone in Sony Xperia
iPhone in HTC
HTC si iPhone
HTC in iPad
Muuqaalka in Android
Muuqaalka Xiriirada in Moto X
Qaybta 1. Import xiriirada in Samsung laga SIM
Iyadoo bedesheen ka phone hore, iyadoo aan loo eegin ay madal, dhaqanka iyo u badan tahay habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan xiriirada in ay telefoonka ku cusub yahay via SIM. Haddii aad ku sugan tahay caado ka mid ah xiriirada si aad SIM badbaadiyo, aad si fudud u qaadan karaan kaarka SIM ka soo telefoonka jir ah, waxa ay ku riday mid ka mid ah oo cusub, iyo bilaabin isticmaalka telefoonka cusub sida caadiga ah.
Si kastaba ha ahaatee habkan ayaa xaddidaadda mid ah oo kaliya kaas oo ah, inta badan kaararka SIM keydin karta oo kaliya tiro kooban oo xiriiro. Ka dib markii tirada ugu badan ee xiriirka la badbaadiyey ee SIM ah, waa in aad markaas ku badbaadin xiriirrada kale oo ku saabsan kaydinta qalabka, iyo in xaaladda noocan oo kale ah, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u qabtaan qaar ka mid ah tallaabooyinka dheeraadka ah.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay 500 xiriirada ee dhex 250 xiriirada ay horeba u kaydsan ee SIM oo dhan iyo kuwa ka harsan tahay in aad kaydinta qalabka, waxaa loo baahan yahay in aad maraan habka kala iibsiga labo jeer.
Si kastaba ha ahaatee, nidaamka weli waa mid fudud aad u oo aan u baahnayn ka qaybgalka wax qalab dhinac saddexaad. Haddii loo maleeyo in SIM card uu leeyahay 250 xiriirada, tilmaamaha tallaabo-tallaabo in la soo dajiyo kuwa xiriirada u Samsung Galaxy phone cusub la siiyo hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah: Habka siiyo shaqeeyaa Samsung Galaxy S3 / S4 / S5 / qod6 / Fiiro 3 / Note Samsung Galaxy Note 4 4. waxa loo isticmaalaa muujinaya habka soo socda.
1. Geli SIM la xiriir si aad u cusub Samsung Galaxy telefoonka.
2. Daar telefoonka.
3. Fur dhaansha Apps.
4. Ka calanka u soo bandhigay, tuubada Xiriirada .
5. Marka uu ku Xiriirada interface, ka jaftaa badhanka Menu (oo leh saddex dhibcood horizontal) dhankiisii ​​top-midig.
6. Laga bilaabo menu soo bandhigay, tuubada Settings .
7. On the Settings uu furmo, tuubada Xiriirada ..
8. Ka suuqa kala socda oo u muuqata, ka jaftaa xiriirada Import / dhoofinta .
9. Laga soo Import xiriirada / Dhoofinta box in booda, ka jaftaa Import ka SIM .
10. Laga soo Save xiriir si sanduuqa, tuubada Device .
11. Marka taxanaha xiriirka 'waxaa soo bandhigay, ka jaftaa si loo hubiyo checkbox ka dhinaca kore ee bidix in ay doortaan oo dhan xiriirada ku jira liiska.
12. Tubada qabtay dhankiisii ​​top-midig.
13. Sug inta uu xiriir ah ayaa la keeno si aad u cusub Samsung Galaxy telefoonka ka SIM ah.
Qaybta 2. xiriirada Import in Samsung Galaxy via VCF
Haddii aad rabto in rakibaadda ka kaaftoomi-free of barnaamijyadooda Android ah ee aad taleefan via computer, Wondershare MobileGo noqon lahaa bet ugu wanaagsan. Wondershare MobileGo ayaa diyaar u ah dhufto labada Windows iyo Mac, oo aad kala soo bixi kartaa version aad ka doorbido ee barnaamijka isticmaalaya links soo socda.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala Mac, isku day plese Wondershare MobileTrans u Mac .
Ka dib marka aad si guul leh u soo bixi ayaa oo ku rakiban Wondershare MobileGo on your computer, waxaad raaci kartaa habka tallaabo-tallaabo hoos ku siiyey in ay xiriir dejinta si aad telefoon Samsung Galaxy isticmaalaya ah vCard (.VCF) file.
Fiiro gaar ah: A Windows 7 PC waxaa loo isticmaalaa in lagu soo dhoofsadaan xiriirada ka file .VCF ku Samsung Galaxy Note 4 waxaan ku hadlay tusidda this.
1. Ka dib degsado iyo ku rakibidda Wondershare MobileGo on your computer, double-guji icon ay u bilowdo barnaamijka.
2. On the Control Account User sanduuqa xaqiijin, guji Haa in aad bixiso ogolaashahaaga in ay sii wadaan.
3. in PC isticmaalaya cable xogta in geeyey weheliyaan waxaa la Connect telefoonka Samsung Galaxy.
4. Sug ilaa wadayaasha ah ee qalabka mobile loo xiraa kombuutarka oo ku saabsan telefoonka Samsung Galaxy.
5. telefoonka, marka baxdo, ee ah debugging USB ogolow pop-up sanduuqa, tubbada si uu u hubiyo ka Had iyo jeer u ogolaan computer this checkbox.
6. Tubada OK in aad bixiso ogolaashahaaga si loo suurtogeliyo in Samsung Galaxy inay ku kalsoon tahay computer waxa uu ku xidhan yahay.
7. Back on your computer, on Wondershare MobileGo ee interface, riix Xiriirada category ka Murayaad bidix.
8.From ee qeybtii hore (bidix) qaybta ay leeg- tahay xarunta, in la hubiyo in ay Phone: vnd.sec.contact.phone folder la doorto.
9. Riix Import ka sare ee interface ka.
10. Laga soo fursadaha soo bandhigay, guji ka file vCard .
11.On ah Xiriirada Import vCard sanduuqa, guji Browse oo la helo dooro file vCard ka kooban xiriirrada aad rabto in aad soo dhoofsadaan in aad telefoon Samsung Galaxy.
12. Dib-u-hubiyo in Phone: vnd.sec.contact.phone la doorto ee Select xiriirrada akoonka liiska hoos-hoos.
13. Click OK iyo sugto xiriirada si aad u keeno in aad telefoon Samsung Galaxy.
Qaybta 3. Sida loo soo dhoofsadaan xiriirada in Samsung ka iPhone
Haddii aad ka beddelanaya Apple madal si ay Android ama si kale loo dhigo, ka iPhone in Samsung, waxaad la kulmi karaan caqabado qaar ka mid ah halka wareejinta aad xiriirka la leedahay. Nasiib wanaag hadda aad Wondershare MobileTrans in wareejinaya ma aha oo kaliya xiriirada ka iPhone in Samsung Galaxy, laakiin waxa ay sidoo kale ka dhigaysa nidaamka mid aad u sahlan oo toos ah.
A tallaabo-tallaabo hage dhamaystiran oo ku saabsan sida loo isticmaalo Wondershare MobileTrans si ay u gudbiyaan xiriirada aad ka iPhone in Samsung Galaxy ka heli kartaa halkaan: Transfer Xiriirada ka iPhone in Samsung Galaxy (http://www.wondershare.com/transfer/contacts-from -iphone-to-Galaxy-s.html)
Iyada oo waxyaabaha Wondershare, ka phone jir wareejinta xiriir mid ka mid ah oo cusub oo aan marnaba ahaa fudud. Wondershare MobileGo iyo MobileTrans ogolaado in aad si ay u qabtaan hawlo badan oo si karti iyo in sidoo kale la hal mouse-click.
3 Talo on YouTube Isticmaalka in Phones Samsung iyo TV Samsung
3 siyaabood in ay dib u soo kicin Samsung Galaxy S4 / S3
3 Hababka in kaabta Samsung Galaxy S4
2 Siyaabaha Bedelka Music inay Galaxy Note 2
Sida loo Play regelingen Faylal ay ku Samsung Galaxy S5, S4, S3, S2, S
Samsung Phone Photo Recovery: Ladnaansho Photos Khasaaray ka Samsung taleefanka gacanta
> Resource > Samsung > 3 Siyaabaha dejinta Xiriirada in Samsung Galaxy